Kedu Samsung Galaxy S20 ịzụta. Anyị na-atụle ụdị atọ | Akụkọ akụrụngwa
Ignacio Sala | | Mobiles, Telephony
Eziokwu maka nhọpụta ya kwa afọ na February, ụlọ ọrụ Korea bụ Samsung gosipụtara n'ihu ọha ntinye aka ọhụrụ ya na njedebe dị elu nke Galaxy S20 nso, ọnụọgụ nke na-abịa site na njedebe nke atọ: Galaxy S20, Galaxy S20 Pro na Galaxy S20 Ultra . N'otu ihe omume, ọ na-e nyere nke abụọ nzọ na foldable smartphone ahịa na Ihe nkiri Galaxy Z.
Mgbe ọbịbịa nke S20, na n'adịghị ka afọ ndị gara aga, ụlọ ọrụ Korea belatara ọnụahịa nke ọgbọ gara aga, ọgbọ nke ga-adịgide n'ahịa ọ dịkarịa ala n'oge ọnwa mbụ, na-agbaso otu atụmatụ ahụ Apple na afọ ndị na-adịbeghị anya. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmegharị ngwaọrụ ochie gị maka ọhụụ Galaxy S20 ọhụrụ, mgbe ahụ anyị ga-egosi gị otu ntụnyere ga - enyere gị aka ịhọrọ ụdị nke kachasị mma maka mmefu ego gị na mkpa gị.
1 Nkọwapụta nkọwapụta nkọwa
4 Processor, ebe nchekwa na nchekwa
5 Ndị kamera
6 Galaxy S20 ahịa na nnweta
Nkọwapụta nkọwapụta nkọwa
Ihuenyo 6.2-anụ ọhịa AMOLED 6.7-anụ ọhịa AMOLED 6.9-anụ ọhịa AMOLED
Nhazi Snapdragon 865 / Exynos 990 Snapdragon 865 / Exynos 990 Snapdragon 865 / Exynos 990
Ebe nchekwa RAM 8 / 12 GB 8 / 12 GB 16 GB
Nchekwa ime 128 GB nke UFS 3.0 128-512 GB UFS 3.0 128-512 GB UFS 3.0
Rear igwefoto 12 mpx isi / 64 mpx telephoto / 12 mpx obosara 12 mpx isi / 64 mpx telephoto / 12 mpx obosara / TOF sensor 108 mpx isi / 48 mpx telephoto / 12 mpx obosara / TOF sensor
Igwe n'ihu 10 mpx 10 mpx 40 mpx
Usoro njikwa A gam akporo 10 nwere otu UI 2.0 A gam akporo 10 nwere otu UI 2.0 A gam akporo 10 nwere otu UI 2.0
Batrị 4.000 mAh - na-akwado ngwa ngwa na ikuku na-akwụ ụgwọ 4.500 mAh - na-akwado ngwa ngwa na ikuku na-akwụ ụgwọ 5.000 mAh - na-akwado ngwa ngwa na ikuku na-akwụ ụgwọ
Njikọ Bluetooth 5.0 - WiFi 6 - USB-C Bluetooth 5.0 - WiFi 6 - USB-C Bluetooth 5.0 - WiFi 6 - USB-C
Nhazi nke ugbu a nke smartphones dị elu nwere obere ụlọ maka imeziwanye, oke nke na-etinye igwefoto n'okpuru ihuenyo dị ka mgbanwe mgbanwe nke enwere ike iwere dị ka ihe ọhụrụ na nke na-emekarị na ụwa nke telephony. Ọgbọ ọhụrụ a na-ejigide otu ụdị mpụga ahụ na naanị ọdịiche dị na ọnọdụ nke igwefoto dị n'ihu, nke dị ugbu a na mpaghara etiti etiti.
Ihuenyo nke ụdị Galaxy S20 ọhụrụ bụ nke ụdị Infinity-O ụdị Dynamic AMOLED na mkpebi nke 3.200 x 1.440 p. Ihe omuma ohuru nke ihe nlere a nke enyere ayi bu ihe nlere anya, ihuenyo nke nwere ume ohuru nke 120 Hz ma dikwa ya na HDR10 +. Ihe ndị a dị na ụdị atọ nke akụkụ nke a: Galaxy S20 (6,2 sentimita asatọ), Galaxy S20 Pro (6,7 inch) na Galaxy S20 Ultra (6,9 sentimita asatọ).
Processor, ebe nchekwa na nchekwa
Dị ka ọ dị na afọ ndị gara aga, ụlọ ọrụ Korea nke Samsung kpebiri ịmalite ụdị abụọ dị iche iche dabere na njedebe nke ọnụ. Maka ahịa US na China, a na-achịkwa Galaxy S20 site na Snapdragon 865, 8-core processor (2 na 2,84 GHz, 2 na 2,42 GHz na anọ na 1,8 GHz). Ejiri usoro Samsung na-ejikwa usoro Samsung Exynos 990, 8-core processor (abụọ dị na 2,73 GHz, abụọ na 2,6 GHz na Cortex anọ na 2 GHz).
Ebe nchekwa RAM anyị ga-ahụ na ọkwa S20 ọhụrụ dịgasị dabere na ụdị ahụ. Ọ bụ ezie na Galaxy S20 na Galaxy S20 Pro na-achịkwa 8 GB nke RAM na nsụgharị 4G, ụdị 5G na-esonyere 12 GB. Modeldị kachasị elu, nke Galaxy S20 Ultra, ruru 16 GB nke ebe nchekwa na naanị ụdị dị na ya, 5G.
Na usoro nchekwa, Galaxy S20 dị naanị 128 GB nke nchekwa. Galaxy S20 Pro na mgbakwunye na inwe ụdị nke 128 GB, dịkwa na 512 GB, dị ka Galaxy S20 Ultra. Dị nchekwa ahụ bụ UFS 3.0 na ụdị niile anyị nwere ike iji kaadi microSD gbasaa ohere nchekwa.
Samsung nyere nlebara anya batrị nke ọhụrụ a, batrị ruru 4.000 mAh na Galaxy S20, 4.500 mAh na Galaxy S20 Pro na 5.000 mAh na Galaxy S20 Ultra. Niile ọnụ dakọtara na ngwa wireless wireless, na mgbakwunye na inye nkwado maka nkwụghachi ụgwọ, usoro nkwụ ụgwọ nke na-enye anyị ohere ịkwụ ụgwọ Galaxy Buds ma ọ bụ Galaxy Watch na-arụ ọrụ site na azụ nke ọnụ.
A na-egosi Galaxy S20 Ultra dị ka ihe kachasị mkpa Samsung na ụwa nke foto. Ọnụ a nwere 108 mpx isi ihe mmetụta, ihe mmetụta bụ isi na-esonyere lens telephoto na mkpebi nke 48 mpx, lens telephoto nke na-enye anyị 1o magnification optical zoom. Na ijikọta mbugharị anya na ọgụgụ isi, Galaxy S20 Ultra nwere ike ịnye mbugharị ruo 100x.
Onye isi ụlọ akwụkwọ. 12 mpx mmetụta
12 mpx obosara
Ekwentị 64 mpx
Ihe mmetụta TOF
Onye isi ụlọ akwụkwọ. 108 mpx mmetụta
Wide n'akuku 12 mpx
48 mpx telephoto. Ruo 100x magnification na-ejikọ optics na ọgụgụ isi.
Ọ bụrụ na anyị ahapụ akụkụ nke foto nke Galaxy S20, ihe ọzọ dị mkpa dị mkpa nke ụdị niile na-enye anyị bụ ike ndekọ vidiyo na 8k mma.
Galaxy S20 ahịa na nnweta
Samsung Galaxy S20 ọhụụ Samsung ga - akụ ahịa na agba 5 cosmic gray, urukpuru acha anụnụ anụnụ, urukpuru pink, cosmic ojii na urukpuru ọcha, nke ikpeazụ ahụ naanị site na ebe nrụọrụ weebụ Samsung. N'okpuru anyị na-akọwa ọnụahịa nke ụdị ọ bụla:
Samsung Galaxy S20 ahịa
4G mbipute na 128 GB nke nchekwa kwa 909 euro.
5G mbipute na 128 GB nke nchekwa kwa 1.009 euro.
Samsung Galaxy S20 Pro ahịa
4G mbipute na 128 GB nke nchekwa kwa 1.009 euro.
5G mbipute na 128 GB nke nchekwa kwa 1.109 euro.
5G mbipute na 512 GB nke nchekwa kwa 1.259 euro.
Samsung Galaxy S20 Ultra ahịa
5G mbipute na 128 GB nke nchekwa kwa 1.359 euro.
5G mbipute na 512 GB nke nchekwa kwa 1.559 euro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Kedu Samsung Galaxy S20 ịzụta. Anyị na-atụle ụdị atọ ahụ
Galaxy 20 Ultra na iPhone 11 Pro Max